एलसीन्स मोबाइल पहुँच (UMA) बयान गरिएको छ
एलसीन्स मोबाइल पहुँच एक वायरलेस टेक्नोलोजी हो जसले वायरलेस चौडाई क्षेत्र नेटवर्क (जस्तै जीएसएम, 3G, EDGE, GPRS, आदि) र वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (उदाहरणका लागि Wi-Fi, ब्लुटुथ) बीच निर्बाध संक्रमणलाई अनुमति दिन्छ। UMA को साथ, तपाईं आफ्नो क्यारियरको जीएसएम मा सेल कल प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, र कल जीएसएम सञ्जालबाट तपाइँको अफिसको Wi-Fi सञ्जालमा स्विच हुनेछ जुन चाँडै दायरामा हिंड्छ। र उपाध्यक्ष।
कसरी UMA काम गर्दछ
UMA हो, वास्तवमा, सामान्य पहुँच सञ्जालको लागि एक व्यावसायिक नाम ।
जब एक वायरलेस व्यानको माध्यमबाट संचार मा पहिले नै एक हैंडसेट एक ताररहित LAN नेटवर्क को क्षेत्र मा प्रवेश गर्दछ, यो स्वयं को WAN को GAN नियन्त्रक को रूप मा WAN को एक अलग बेस स्टेशन मा प्रस्तुत गर्दछ र वायरलेस LAN नेटवर्क मा बदलन को रूप मा प्रस्तुत गर्दछ । अनियमित लैन लाई इजाजतपत्र WAN को एक अंशको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ, र यसैले संक्रमणलाई सजिलै संग अनुमति दिइएको छ। जब प्रयोगकर्ता ले अनियन्त्रित ताररहित लन्चको दायरालाई बाहिर निकाल्छ, जडान ब्याक वायरलेस WAN मा घुमाइएको छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रयोगकर्तालाई पूर्णतया पारदर्शी छ, कुनै पनि गिरावट वा डेटा हस्तान्तरणमा अवरोधहरू बिना।
मानिसहरूले कसरी UMA बाट लाभ उठाउन सक्छन्?
मानिसहरूले आफ्नो मोबाइल ह्यान्डसेटहरू धेरै स्थानहरू र सञ्जालहरूमा प्रयोग गर्न सक्छन् तर अझै पनि एक मात्र नम्बर छ।
तिनीहरू आफैले आफ्नो वायरलेस ल्यान सेटअप गर्न सक्छन्, यसैले उनीहरूको प्रदायक नेटवर्कको कवरेजमा होलहरूको कारण समस्या समाधान गर्न सक्छन्।
मोबाइल सेवा प्रदाताको सञ्जाल बाहिर रोमिङ शुल्कहरू हटाइएका छन् किनकि कलहरू निःशुल्क अनियमित वायरलेस ल्यानमा सुरु गर्न सकिन्छ।
मोबाइल संचार अधिक भरोसेमंद र सस्तो हुन्छ, केहि मान्छे को महंगे PSTN फोन सेवा को बदलन को लागि प्रोत्साहित।
प्रदायकहरूले कसरी UMA बाट लाभ उठाउन सक्छन्?
वाहकहरूले ताररहित वै्यान हार्डवेयरमा लगानी गर्नुको सट्टा नेटवर्क कवरेज होलहरूमा Wi-Fi हटस्पटहरू सेट गर्न सक्छन्।
जीएसएम र अन्य वायरलेस WAN सञ्जालहरूमा बधाई ट्राफिकको भागबाट छुट्याइएका छन् जुन अनियन्त्रित वायरलेस ल्यानमा टगल गरिएको।
Wi-Fi जस्ता सञ्जालहरू अन्य प्रकारका मिडियाहरू सार्नका लागि राम्रो छन् जुन जीएसएमको सट्टा आवाजबाट। यसरी, प्रदायकले सञ्चार प्याकेजहरू डिजाइन गर्न सक्छ जुन भ्वाइस भन्दा बढी समावेश गर्दछ। यो क्षमता विशेष गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लागि रोचक छ जुन सेवा विस्तार गर्न र खर्च घटाउन उत्सुक हुन्छ।
UMA प्रोटोकॉल स्ट्याकमा आईपी सञ्जाल परतमा सञ्चालन गर्दछ र यसकारण यसैले इन्टरफेस तहमा धेरै प्रोटोकॉलहरूमा खुल्ला छ, यो एक सञ्जालसँग सीमित छैन, तर Wi-Fi, ब्लुटुथ आदि काम गर्न सक्छ।
UMA को हानिकारक
हैंडसेटहरू UMA-compatible हुनुपर्छ। यो दुर्लभ र धेरै महंगी हो। यो प्रदायकहरू र सदस्यहरूका लागि दुबै समस्या हो।
UMA प्रदायक गतिशीलता हुँदा, एसआईपी आधारित सेवा र सेवा जस्तै Skype जस्तै नि: शुल्क वा धेरै सस्तो कल उपलब्ध गराउन सकिँदैन। नतिजाको रूपमा, धेरै मामिलामा मूल्य-कटौती हुन सक्दैन।
UMA को प्रयोग गर्न, तपाइँलाई ताररहित सञ्जाल योजना, एक ताररहित LAN-आफ्नै वा एक सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पट र एक मोबाइल हैंडसेट चाहिन्छ जुन UMA लाई समर्थन गर्दछ। केही Wi-Fi र 3G फोनहरू यहाँ काम गर्दैन।
तपाईंको आईप्याडलाई फोनमा बदल्नुहोस्
Nimbuzz भ्वाईस र च्याट एप समीक्षा
तपाईंको वीओआईपी फोन एडाप्टर (ATA) समस्या निवारण
फ्रिंग - नि: शुल्क मोबाइल वीओआईपी कल
वीओआईपी उपकरण र समाधान विक्रेताओं
तपाईंको आईपड टचमा एक फोनमा कसरी
के तपाईंको फोन भिजुअल भ्वाईस मेल छ?
कसरी भिडियो र भ्वाईस कलहरू जीमेल भ्वाईस र भिडीयो कुराकानी बनाउनुहोस्
ग्रेट एन्ड्रोइड बेसबल खेलको ट्रिपल प्ले
वरिपरि ध्वनि ढाँचा गाइड
रङ कर्पोरेट ब्लू को लागि एक गाइड
फ्लैशमा फ्ल्यास कसरी सक्षम पार्नुहोस्
सबैजनासँग को उपहार लिने
तपाईंको Apple TV को साथ कसरि AirPod को उपयोग गर्नुहोस
साँच्चै संग काम खोज्नुहोस्
2018 मा 8 बेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश किन्नका लागि
बुझ्नुहोस् कि ब्लुटुथ रिसीभरहरू साँच्चै ध्वनि फरक हुन्छ
एप्पल र एफबीआई: के के गर्दैछ र किन यो महत्वपूर्ण छ
प्लेस्टेशन क्यू के हो?
स्प्यामसिसिनमा प्रेषक वा डोमेन कसरी व्हाइटलाइटिस्ट गर्नुहोस्
स्काइप सबै उमेरका जनजातिहरूका साथ
10 नि: शुल्क विद्यार्थीहरू विद्यालयका लागि निःशुल्क अनुप्रयोग
एक क्षेत्र के हो?
फेसबुकमा च्याट गर्नुहोस्
एलसीडी टीवीहरू - तपाइँलाई थाहा छ र सुझावहरू किन्नु आवश्यक छ
तपाईंको एप्पल टिभिमा फेसबुक भिडियो कसरी हेर्नुहोस्?
HTM वा एचटीएमएल फाइल के हो?
6 कहिलेकाहीँ प्रयोग गरिएका ढाँचाका लागि नि: शुल्क फाइल कनवर्टर
2018 मा बेचन गर्न 10 सर्वश्रेष्ठ वर्चुअल रियल्टी हेडसेट
एक आईफोनमा ग्रेटेड-आउट वाइफाइ ठीक गर्न सरल तरीका सिक्नुहोस्